ကြာသာပတေးနဲ့သောကြာနှစ်ရက်စလုံး သံရုံးမှာ သမီးလေးဒုတိယတန်းဖြေရတယ်လေ။ တစ်နှစ်ကို (၂)ကြိမ်ဖြေပြီး အတန်းတက်ပေးတာပါ။ ဒါနဲ့စကားမစပ်၊ မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်မှာ ဘာလို့ first grade ကို သူငယ်တန်းလို့ခေါ်လဲမသိပါဘူး။ Third grade ကျတော့ ဒုတိယတန်းဖြစ်နေတာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်တို့၊သိပ္ပံဖတ်စာအုပ်တို့မှာကျတော့Third grade လို့ရေးထားပါတယ်။
ဂျပန်ကျောင်းတွေက (၆)နှစ်တင်းတင်းပြည့်မှ ပထမတန်းစနေလို့ရတာမို့၊ ဧပြီလကျောင်းစဖွင့်တာနဲ့တွက်တဲ့အတွက် သမီးကသြဂုတ်လဖွားဆိုတော့ အခု (၇)နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန် ပထမတန်းဘဲရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာကျောင်း Third grade နဲ့ယှဉ်တော့
သင်္ချာက တော်တော်လွယ်နေပါတယ်။ သင်္ချာအပြင်၊ တရုတ်ခန်းဂျီးစာလုံး၊ ဂျပန်ဟီရဂနအရေးအသား၊ ခတဂနအရေးအသား၊ အိမ်တွင်းမှု (အရုပ်လုပ်တာစတာတွေ)၊ နေ့စဉ်ဘ၀အထောက်အကူဘာသာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား၊ ဂီတ၊ စတဲ့ဘာသာတွေသင်ရပါတယ်။
နေ့လည်ဆိုကျောင်းက ထမင်းကျွေးတယ်။ အားလုံးအလှည့်ကျ ထမင်းဟင်းခူးတာဝန်ယူကြရတယ်။ ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးတာတွေကတော့ (အင်္ဂလိပ်စာမသင်တာကလွဲရင်) အားရစရာပါ။ ဂျပန်မှာက အထက်တန်းမရောက်ခင်အထိ အတန်းတင်စာမေးပွဲဆိုတာမရှိဘူး။ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကလေးတွေကို နေ့စဉ်ပညာရည်တိုးတက်မှုအခြေအနေကို monitor လုပ်ပေးတယ်။ ၃လတစ်ခါ မိဘနဲ့ဆရာ တစ်ဦးချင်းတွေ့ပြီး လိုအပ်တာပြောပြ၊ ဆွေးနွေးစတာတွေလုပ်ပေးပါတယ်။ အသက်နဲ့အလိုက်တက်ရမယ့်အတန်းကို အလိုအလျောက်တက်သွားတယ်။ အထက်တန်းရောက်မှ အတန်းတင်စာမေးပွဲဆိုတာရှိပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်ဖို့လည်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲထပ်ဖြေရပါတယ်။ (ဒီစနစ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလို ၁၀တန်းမှာနဲနဲချွတ်ချော်သွားလို့ ရည်မှန်းထားတဲ့တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်မရကြရှာတဲ့ လူတော်ကလေးတွေ၊ ၀ါသနာမပါဘဲ ဆေး၊သွားတက္ကသိုလ်တွေရောက်လာပြီး၊ စာကောင်းကောင်းမသင်တဲ့ကလေးတွေ၊ ဆရာဝန်ဘွဲ့ရပေမယ့်ဆေးမကုတဲ့သူတွေ စတာတွေ နည်းပါတယ်။)
သမီးကို နေ့တိုင်းညပိုင်းမှာ နာရီဝက်တစ်နာရီလောက် မြန်မာကျောင်းစာလုပ်ခိုင်းရပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့သိပ်စိတ်မ
၀င်စားဘူး။ မနေ့ကစာမေးပွဲဖြေရတော့၊ စိတ်ပင်ပန်းပြီးပြောတာက.. ဂျပန်လူမျိုးတွေဘဲကောင်းတယ်နော်..စာမေးပွဲလည်းမဖြေရဘူး..တဲ့။
ဂျပန်မှာ ကိုယ့်ဆီကနဲ့ယှဉ်ရင်ကောင်းတာ အားကျစရာတွေအများကြီးရှိပေမယ့် သမီးကိုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံချစ်တဲ့ဇာတိမာန်နည်းသွားမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ဆီက ကောင်းတာတွေဘဲ များများပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကလေးတွေက သမီးလို အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူး..တို့၊ သမီးကသူတို့ထက် သချာင်္ပိုတော်တယ်..တို့၊ ဆရာဝန်တွေဆိုလည်းမြန်မာပြည်ကပိုတော်တယ်..တို့ ပြောပြရပါတယ်။ စကားမစပ်၊ ဂျပန်တွေက စက်တွေအားကိုးတာများတော့ လက်ရည်၊ဥာဏ်ရည် လျော့လာပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရင် လူကသေချာစစ်ဆေးတာမလုပ်ဘဲ စက်တွေကပြတဲ့ result တွေကိုဘဲ အားကိုးလေ့ရှိတယ်။ ကျောင်းသားနဲ့အလုပ်သင်ဘ၀တွေမှာ လက်တွေ့နည်းခဲ့လို့ skill ညံ့ပါတယ်။ တနေ့က မိတ်ဆွေကြီး Dr. Yamada ဆေးရုံမှာဆေးစစ်ပြီးအပြန်တွေ့တော့၊ လက်နှစ်ဘက်လုံးမှာ ပလာစတာကပ်ထားလို့ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမေးကြည့်တော့၊ သွေးဖောက်တာ ဘယ်ဘက်မရလို့ ညာဘက်ပြောင်းနဲ့ ၄ ချက်လောက်အဖောက်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့။ ဒါတော်လာတာတဲ့။ ဆေးရုံတက်တုန်းက ဆေးသွင်းတော့ တစ်ခါဆေးသွင်းရမယ့်အရေး အကြောမရှာတတ်လို့ (၂၄) ချက် အပ်သွင်းခံခဲ့ရဖူးတယ်တဲ့။ သူသေချာရေထားတာတဲ့။ သွားဘက်ဆိုလည်း၊ သွားတစ်ချောင်းမှ မနှုတ်ဖူးတဲ့ ဆရာဝန်လေးတွေရှိလို့ ပညာရေးစနစ်ကို တစ်ခုခုပြင်ကြဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော့်ပါမောက္ခက ညီးတွားပြဖူးပါတယ်။ ငါတို့တုန်းက ကျောင်းပြီးစမှာ (၂၀)ချောင်းလောက်နှုတ်ဖူးတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကျောင်းသားဘ၀မှာ ပဉ္စမနှစ်ကတည်းက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို (၂၀)ချောင်းလောက် နှုတ်ဖူးခဲ့ပြီး၊ အလုပ်သင်ဘ၀ဆေးရုံကြီးမှာ တစ်ရက် (၅၀) အနည်းဆုံး၊ တစ်လလုံးလုံးနှုတ်ပေးခဲ့ရတာတော့၊ ဆရာ့ကိုမပြောပြတော့ပါဘူး။ စိတ်လေသွားမှာစိုးလို့။
ရုပ်ဝတ္တုအတတ်ပညာပိုင်းမှာဂျပန်ကသာပေမယ့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်မှာတော့ မြန်မာက ပိုသာတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အားနည်းတာတွေဖြည့်ပေးဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့လို သိမြင်လာတဲ့ ပညာသင်တွေက (နောင်တချိန်လူကြီး ဖြစ်လာခဲ့ရင်)
Posted by Dr. Nyan at 7:19 AM
ဂျပန်မှာ အထက်တန်းအထိ စာမေးပွဲမရှိဘူးပေါ့လေ။ ခုမှသိတော့တယ်။
အင်! သွေးဖောက်တာ ၂၄ချက်တောင် အပ်စိုက်ခံရတယ်ပေါ့လေ။ ဘုရား ဘုရား။ နဂိုကတည်းက အပ်မြင်ရင် တကိုယ်လုံး ကျင်တက်လာတာ။ အဲလိုသာဆို ဆေးရုံ လုံးဝမသွားတော့ဘူး။ ညီမ ဒီမှာ medical check up လုပ်တုန်းကတော့ တခါတည်း သွေးကြောထဲ တန်းဝင်သွားတယ်။ အရမ်းလဲ မနာဘူး။ မြန်မာမှာတုန်းက သွေးဖောက်တိုင်း သွေးကြောထဲမဝင်ဘဲ ဆေးထိုးအပ်ကို စုပ်ထုတ်တာ ၂ခါတောင် ခံရဘူးတော့ အရမ်းကြောက်တာ။ နောက်ရက်ဆို လက်မောင်းအရင်းတို့ တံတောင်စစ်နားတို့မှာ အညိုကွက် အကြီးကြီး ထွက်လာတယ်။ pressureလျော့သွားလို့လားမသိဘူး။ ပြန်စဉ်းစားရင် ကြောက်တောင်လာတယ်။
ပျောက်နေတာ ဟုတ်တယ် ဆရာရေ့။ မဝါတက်ထားတာတောင် မဖြေရသေးဘူး။ ဆရာ့ကို မေးမလို့၊ ညီမက သွားတိုက်ပြီးရင်း လျှာခြစ်တံနဲ့ပါ လျှာကို ခြစ်တယ်။ အဲဒါမှ ပိုသန့်သွားသလို ခံစားရလို့။ အိမ်မှာတုန်းကတော့ ဇွန်းကိုသုံးတယ်။ ဒီရောက်တော့ ယန်း၁၀၀ဆိုင်မှာ လျှာခြစ်တံတွေ့လို့ ဝယ်သုံးတာ အတော်အဆင်ပြေတယ်။ လက်ကိုင်ကတော့ သွားတိုက်တံ အတိုင်းပါဘဲ၊ ထိပ်ဘက်မှာတော့ တြိဂံဇောက်ထိုးပုံနဲ့ ခပ်ရှောရှော ကော်ပြားလေး။ ညီမက နဂိုကတည်းက ကျင့်သားရလာလို့ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသားက လျှာခြစ်ရင် အံချင်တယ်။ ညီမလည်း အခန့်မသင့်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက လန့်တော့ သိပ်မသုန်းဘူး၊ ပြီးတော့လာမေးတယ် လျှာခြစ်တာ ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲတဲ့။ သန့်တာပေါ့လို့ဘဲ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သွားတိုက်ပြီး လျှာခြစ်ရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးရတယ်ဆိုတာပါ သိချင်လို့ ဆရာအားတဲ့အခါ ပို့စ်အနေနဲ့ ရေးပေးပါဦးနော်။
comment အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လျှာခြစ်တာ
အစ်ကိုရေ အလည်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုလို ဂျပန်နဲ့
မြန်မာ နိုင်းယှဉ်ပြီး ရေးပြထားတော့ တစ်ကယ်ကို အားတက်မိပါတယ် .... အစ်ကိုပြောသလိုပါပဲ
ကျနော် တို့ မြန်မာက သာတာတွေလည်း အများကြီးပါ
ဒါပေမယ့် နည်းပညာ မှာ မမှီနိုင်သေးတော့ ဒီလိုပဲ နေနေရတာပါပဲဗျာ ..
စကားစပ်လို့ ပြောရဦးမယ် အစ်ကိုရေ .
ကျနော် ဒီမှာ အံဆုံးပေါက်လို့ ဆေးခန်းကို သွားပြတာ
လှီးထုတ်လိုက်တာဗျာ .. နာလွန်းလို့ မျက်ရည် ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျတယ် ..
ထုံဆေးတော့ ထိုးပေးပါရဲ့ .. သူမနက်စာစားနေတာကို စောင့်ရင်းနဲ့ ထုံဆေးက ပျယ်သွားတယ် .. ပြီးတော့ ထပ်မထိုးပဲနဲ့ ကိုင်ထုတ်လိုက်တာ .. အီစလန်ဝေသွားတာပဲ .. ဒါနဲ့တော်ပြီ ဆိုပြီး နောက်ဆေးခန်း တစ်ခု သွားပြရတယ် ...
တစ်ကယ်ကို စေတနာ မပါတာ အစ်ကိုရေ ...
လည်းထုံဆေးက မထိရောက်တတ်ဘူး။ အရောင်ကျ
That's great post ,bro! We can guess about the conditions of Japan , actually in education and differences between burmese and japanese.